Chaw Chaw kg lay's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Chaw Chaw kg lay
Blog Posts (4)Discussions (10)EventsGroups (2) Chaw Chaw kg lay's Likes Chaw Chaw kg lay's Groups
Chaw Chaw kg lay's Discussions
မြန်မာ့ပထမဆုံး iphone,ipad,Tablet,Andriod OS,Laptop တွင်သုံးနိုင်သည့် ဂျာနယ် များ လင့်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲလေး
အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပြန်ပြီဗျို့။Developer တစ်ဦးရေးထားတဲ့ ဖုန်းတွေ တက်ဘလက်တွေမှာသုံးနိုင်တဲ့ မြန်မာ့ပထမဦးဆုံး သတင်းဂျာနယ် လင့် နဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါ။ကော်ဖီဆိုင်မှာ ထိုင်ထိုင် ၊ တီးရှော့မှာပဲ…Continue Started Oct 24, 2012 မြန်မာ Data Traveller ဆိုက်လေး
အင်တာနက်သုံးသူတွေအတွက်တော့ အသုံးသိပ်ဝင်မှာသေချာပါတယ်။ဆော့ဖ်ဝဲတွေရော စာအုပ်တွေရော သတင်းအချက်အလက်တွေရောပါတဲ့ဆိုက်လေးပါ။ Data တွေအစုံပေါ့.......…Continue Started this discussion. Last reply by hnin wai wai hlaing Jun 19, 2012. အပီအပြင်ဖတ်ဖို့ ...
အင်တာနက်သုံးသူတွေ စာဖတ်တဲ့ဆိုက်လေးတစ်ခုအသုံးလည်းဝင်မည်ထင်သဖြင့်......http://www.khtnetpc.webs.comContinue Started May 27, 2011 View All
Chaw Chaw kg lay has not received any gifts yet
Chaw Chaw kg lay's Page
Bijamon liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Nov 25zawzaw liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Feb 8Chaw Chaw kg lay replied to thadaungsarlay's discussion Copyright လုပ်ခြင်း"copyright ကို အမှန်တကယ် ထောက်ခံပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းမှာတကယ်ရှိသင့်တဲ့အရာပါ။သို့သော် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ တိုးတက်ကာစဖြစ်တဲ့အတွက် copyright လုပ်ဖို့ အချိန်တွေအများကြီးလိုပါသေးတယ်။copyright ကို အမှန်တကယ်…"Jan 31Chaw Chaw kg lay replied to ATS PTU's discussion Inkjet printer ဆေးဖြည့်နည်း မေးပါရစေ"မင်းကုန်ရင် ဘူးလိုက်ဝယ်ဖြည့်တာပိုကောင်းပါတယ်... ကာလာကုန်ရင်တော့ သုံးဘူးတွဲလျက် ၀ယ်ရပါတယ်။ အနက်ကုန်ရင်တော့ သီးသန့် ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ အနက်ကတော့ အကုန်မြန်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် အနက်ကို ၀ယ်ဖြည့်ရပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဆေးအရမ်းနည်းတဲ့အခါ မင်မလိုက်တော့ပါဘူး။…"Jan 20Chaw Chaw kg lay replied to May Soe's discussion English Learning"www.khtnetpc.webs.com မှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေ ရပါလိမ့်မယ်။"Jan 20Kyaw Saw liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Jan 16Thirdeye liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Jan 16sweswe liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Jan 16Chaw Chaw kg lay replied to Newton's discussion BBC OK, MyanarITPro.com NOT OK to see Myanmar characters"In my knowledge there is no myanmar font to install when website write with Padauk Unicode font. But Other Myanmar Unicode need to install myanmar unicode fonts. So you need to install Myanmar Unicode Font, Zawgyi Font and others or Change to use…"Jan 15KoMyint liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Jan 12moenyo201@gmail.com liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Jan 3thein htun liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Dec 23, 2012Chaw Chaw kg lay postedablog postအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)အောက်ပါစာအုပ်များအပါအ၀င် တခြားစာအုပ်များပါ အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။လိုချင်သူများလေ့လာချင်သူများအတွက်…See MoreDec 19, 2012 0
ဇာနည် liked Chaw Chaw kg lay's blog post အိုင်တီ၊ နှင့် သတင်းအချက်အလက် အထောက်အကူ မြန်မာဆိုက်Oct 5, 2012 More... RSS
Chaw Chaw kg lay's Blog
Posted on December 12, 2012 at 11:26pm0Comments
အောက်ပါစာအုပ်များအပါအ၀င် တခြားစာအုပ်များပါ အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။…
Continue အိုင်တီ၊ နှင့် သတင်းအချက်အလက် အထောက်အကူ မြန်မာဆိုက်
Posted on June 18, 2012 at 8:45pm2Comments
အလွန်အကျိုးရှိတဲ့မြန်မာ Data Traveller ဆိုက်လေးလူတိုင်း လူတိုင်း အတွက် သိပ်အသုံးဝင်မှာဖြစ်တဲအတွက်
MMITPRO မှ မြန်မာစာများဖတ်လို့မရပါ။
Posted on June 8, 2011 at 5:26pm5Comments
ယူနီကုဒ်လား ဘာလားတော့ မသိပါဘူး ဇော်ဂျီထက်လည်း ကောင်းတယ်လို့ကြားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခု ဘယ်ဆိုင် ၀င်ဖတ်ဝင်ဖတ် ဖတ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတာတွေကိုတော့ ဖတ်လို့ရပါတယ်။
ဘယ်လိုမှမထင်ကြပါနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အင်တာနက်သုံးသူတွေ အတွက် အသုံးတည့်မည့် စာဖတ်ဆိုက်လေး
Posted on May 27, 2011 at 12:36pm0Comments
http://www.khtnetpc.webs.com AddaBlog Post
ml updated their profileyesterdaymanawphyulay leftacomment for Aung Kyaw HtinSaturdaymanawphyulay leftacomment for Ko ChitSaturdaymanawphyulay and ugly devil are now friendsSaturdaydevillove replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျDec 4peepaw replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျDec 3Nga_Pyort replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျDec 3LIquid@crystal replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျNov 29pyiphyomgmgsoe updated their profileNov 26pyiphyomgmgsoe leftacomment for thinnNov 26pyiphyomgmgsoe replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Free SIP for Testing ! ! !Nov 26pyiphyomgmgsoe replied to Aung Myo Htet's discussion About CiscoNov 26 More... RSS